LG G Watch R စမတ်ဖုန်းကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရရှိနိုင် | Androidsis
IFA 2014 ၏နောက်ဆုံးထုတ်ဝေမှုတွင်အဓိကထုတ်လုပ်သူများကသူတို့၏စမတ်နာရီများကိုတင်ပြခဲ့သည်။ အများဆုံးအာရုံကိုသိမ်းယူသောသူတို့ထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် LG က G စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ R ကိုနာရီစက်တစ်လုံးပါသည့်ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူထံမှအသစ်နာရီ။
ဒါဟာအီးမျှော်လင့်ထားခဲ့သည်LG နာရီကိုစပိန်နိုင်ငံသို့နို ၀ င်ဘာလတစ်လလုံးတွင်ရောက်ရှိမည်, ဒါပေမယ့်တစ်နေ့အစောပိုင်းနှင့်ယနေ့မှစ။ သင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် LG က G စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ R ကို en အမေဇုံစပိန် အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်စျေးနှုန်းမှာ:273,89 ပေါင်း 4,99 ယူရိုရေကြောင်းကုန်ကျစရိတ်။ တရားဝင်ဈေးနှုန်းဟာယူရို ၂၉၉ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပါ။
G Watch R ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရနိုင်သည်
အဆိုပါကွောငျးသတိရပါ , G စောင့်ကြည့်ရေး R ကိုဖြစ်ပါတယ် အပြည့်အဝမြို့ပတ်ရထား display နဲ့သာ device ကို(the Moto 360 သည်ဗေဒကိုဗေဒ၏အောက်ပိုင်းဘားတွင်ရှိသောအလင်းအာရုံခံကိရိယာဖြင့်ချိုးသည်) ။ ဒါကြောင့်သင်ကပိုပြီးရိုးရာဒီဇိုင်းနဲ့စမတ်နာရီကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် LG လက်ပတ်နာရီအသစ်ကအရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပါ။
ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူ သံမဏိနှင့်သားရေကြိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ LG G Watch R ရဲ့ထိတွေ့မှုကတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်ပါတယ်။ ၁.၃ လက်မအရွယ် P-Oled နယ်ပယ်သည် resolution 1.3x 320 pixels ရှိပြီး resolution ကိုဖော်ပြပေးသည်။
သင့်ရဲ့ Processor ကိုတစ် ဦး ၏ဖွဲ့စည်းထားသည် Qualcomm ၏ Snapdragon 400 1.2 GHz 512MB RAM နှင့် 4GB Internal Storage ပါရှိပါသည်။ LG လက်ပတ်နာရီသစ်သည်ဖုန်နှင့်ရေကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေသည့်၎င်း၏ IP67 အသိအမှတ်ပြုချက်ကိုအလေးပေးဖော်ပြပါ။ အခြားအင်္ဂါရပ်များအနက်နှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်သံလိုက်အိမ်မြှောင်၊ G Watch R ရှိ 410 mAh ဘက်ထရီသည်ကိရိယာ၏ hardware အားလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
Un Moto 360 အတွက်အလွန်လေးနက်သည့်ပြိုင်ဘက် ဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ LG G Watch R ကိုယှဉ်ပြိုင်ရန်အလွန်ထိုက်တန်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Moto 360 ကိုကိုင်ရတာအရမ်းခက်တယ်ဆိုတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်၊ အထူးအရောင်းဆိုင်တော်တော်များများမှာရောင်းရတာဖြစ်ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်အဆင့်မြင့်ပြီးဆုံးတဲ့စမတ်နာရီကိုလိုချင်ရင်ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူက ၀ တ်ဆင်နိုင်မယ့်အသစ် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများထဲမှတစ်ခု
ဘယ်တစ်ခုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သလဲ Moto 360 ဒါမှမဟုတ် LG G Watch R?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G Watch R ကိုယခုအခါ Amazon Spain တွင်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်
ဘက်ထရီဘယ်လောက်ကြာကြာခံမလဲ mmm 10h ?? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထည်၊ ဒီလက်ပတ်နာရီကိုမိုဘိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာကပျက်ကွက်တာမဟုတ်ဘူး၊
Android အတွက် BBM ကိုသင်ဖျက်လိုက်သောမက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖျက်ရန်နှင့်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ရန်ခွင့်ပြုသည်